Moa ve ianao eo amin'ny fikatsahana ny hahita an-tserasera slot izay miasa eo amin'ny samy PCs sy finday fitaovana ary manolotra maimaim-poana mampino kofehy ireny endri-javatra? dia Zeus III (Sci Games) -tserasera slot no toerana halehany! Izy io dia tsy manam-paharoa amin'ny aterineto slot novokarin'ny WMS lalao, izay fantatra noho ny miakatra amin'ny vaovao sy ny lalao video amin'ny aterineto lalao.
Zeus III (Sci Games) manome anao mahafinaritra 6-reels sy 192 betline platform to put lots of money at stake and win a very big amount per spin. Afaka ho hatahotra rehefa mahita ny miraingiraingy azon'ny rafitra sy ny fomba goavana ity lalao mandroso.
Tapaka ny loha-hevitra sy ny fanehoana an'ohatra:
Zeus III ny foto-kevitry Mifototra amin'ny andriamanitra grika sy ny vanim-potoana. Izany dia hita mazava tsara eo andamosiny ny fahiny tempoly ny teny grika sy ny rahona mivezivezy manodidina ny reels. Raha ny marina, reels lamba manarona ny manontolo ho toy ny isan'ny andalana mitombo isan-miraingiraingy azon'ny. Ny ilaina rehetra asa no hita eo amin'ny ankavia-tanana ilany ny efijery, izay ahitana Auto-tsehatra, Bet habe, paylines sns.
Ny zavatra malaza grika fahiny no ampiasaina Zeus III (Sci Games) toy ny avo-zava-dehibe fanehoana an'ohatra. Izany dia ahitana indrindra indrindra fahiny vola madinika, ny vazy, ny sambo, fiarovan-doha, ny Pegasus sy Tompo Zeus. Misy ihany koa ny vidiny ambany dia ambany fanehoana an'ohatra, izay ahitana fanehoana an'ohatra ny milalao karatra.
Ny Zeosy mihitsy milalao toy ny fivoaky ny marika amin'ity lalao, raha tany amin'ny miraingiraingy azon'ny nandritra ny base lalao. Na izany aza, ny tempoly dia ny bibidia marika famantarana eo ity lalao ity ka ampielezo no misolo tena ny tselatra ao amin'ny Tompo Zeus 'tanana.
Bonus endriky ny tempoly an'ala:
Ny tempoly dia afaka tanety mariky an'ala na aiza na aiza amin'ny reels ary afaka mahasolo marika ny bibidia hafa mba hanangana ny tsara kokoa dingana.
Zeus Tompo no bibidia iray hafa marika amin'ny Zeus III (Sci Games) -tserasera slot, izay afaka tany stacked endrika. It acts as the expanding wild symbol and covers all the positions if you get the stacked wilds of Lord Zeus.
Free spins mampiseho:
Free spins no zavatra izay mpilalao isan-tsehatra Zeus III (Sci Games). Izany dia manolotra maimaim-poana amin'ny aterineto slot spins amin'ny ampahany. tany ihany 3 Mampiely na aiza na aiza eo amin'ny 2ND ary 6faha Nisangodingodina ary no hahatananareo 10 maimaim-poana spins. tany 4 manahaka, dia hahazo 25 maimaim-poana sy ny fipetrahana spins 5 manahaka no ho luckiest namoly ho anareo amin'ny ity lalao ity, satria mahagaga no hahatananareo 50 maimaim-poana spins miaraka amin'ny mahagaga 50x multiplier. Mety mifamadika ny reels ny toerana maimaim-poana nandritra ny spins manodidina mba hanatsara ny Fandresena. Afaka mahazo bebe kokoa 5 maimaim-poana spins raha tanety 2 manahaka bebe kokoa kofehy ireny maimaim-poana nandritra ny fihodinana.
WMS lalao efa foana slot Zeosy aterineto ny lazan'ny amin'ny fampidirana ny sasany tena mahagaga tombony endri-javatra. Ity slot manana 96.1% RTP taha amin'ny 3.81% trano sisin'ny ary izany no mahatonga ity mahafinaritra slot!